China nzima wayesebenzisa mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Ukuba ukhe wafunda ukwenza izikhonkwane zakho zoqweqwe lwawo, kusenokwenzeka ukuba ukhe wahlangabezana namagama athi “i-enamel enzima” kunye “ne-enamel ethambileyo.” Ndicinga ukuba abantu abaninzi banombuzo ofanayo: Uyintoni umahluko phakathi kwezi zimbini? Umahluko phakathi koqweqwe lwawo lukhuni kunye ne-enamel ethambileyo bubunjani bemveliso egqityiweyo. Umgangatho awunazingcingo, kwaye umphetho wentsimbi wekhonkwane ye-enamel ethambileyo yi-convex. Zombini iindlela zisebenzisa ukungunda kwesinyithi okufanayo, kwaye zombini zinemibala eqaqambileyo kwaye eqaqambileyo Kodwa kukho ukhetho olukhethekileyo olukhethekileyo kwi-enamel ethambileyo.
Izikhonkwane ze-enamel ezilukhuni zihlala ixesha elide kwaye ziyanyangeka xa kuthelekiswa ne-enamel ethambileyo. Abantu abaninzi bakhetha i-enamel enzima kune-enamel ethambileyo ngenxa yokucoceka, ukugqitywa kokujonga. Uyilo oluninzi lunokusebenza kuzo zombini i-enamel enzima kwaye ithambile, ke ixesha elininzi liza ezantsi kukhetho lomntu. Izikhonkwane ezinzima zoqweqwe lwawo zigcwaliswa kuqala ngombala, emva koko ubuso bepini buyekelwe emhlabeni ukuze buthambeke kwaye bugudise. Ukusila kunye ipolishi kubenza zingangqinelani kunye zigqityiwe ezithile zesinyithi. Ukuba ufuna isingxobo segolide okanye sesilivere esimnyama, i-enamel enzima inokuba lukhetho olufanelekileyo kuyilo lwakho.
Izikhonkwane ze-enamel ezilukhuni zihlala zomelele kwaye zikrwela ukumelana nezikhonkwane ze-enamel ezithambileyo.
Abantu abaninzi bakhetha i-enamel enzima kune-enamel ethambileyo ngenxa yokubonakala kwayo okucocekileyo nokuqaqambileyo.
Uyilo oluninzi luyafumaneka kuzo zombini i-enamel enzima kwaye ithambile, ke ixesha elininzi lixhomekeke kukhetho lomntu.
I-pin yoqweqwe lwawo olunzima inombala wokuqala kwaye umphezulu wepini ulungisiwe.
Ukugaya nokugusha kubenza bangahambelani nendawo ezithile zentsimbi.
Ukuba ufuna isingxobo segolide okanye sesilivere esimnyama, i-enamel enzima lukhetho olufanelekileyo kuyilo lwakho.
Kwi-enamel enzima, i-enamel yongezwa ngaphambi kokuba i-plating yongezwa, i-enamel iyongezwa kwaye iphosiwe iflethi kwinqanaba elifanayo njengemigca yokufa yensimbi. Umbala ngamnye kufuneka ubhakwe ehovini nganye nganye eyongeza kwinkqubo kunye neendleko. Nje ukuba yonke imibala yongezwe emva koko ibheji inokufakwa kwi-electroplated kwaye iphoswe kwakhona ukugqibezela ibheji. Inkqubo yokupholisha emininzi kukuba kutheni ibheji inokufezekisa iinkcukacha ezingaphantsi kwe-koqweqwe lwawo oluthambileyo kwaye kutheni eminye imigca yesinyithi inokuthi isasazeke kwimveliso kwaye ibe nkulu kunoyilo lokuqala. Inkqubo yethu ye-enamel enzima yinkqubo yala maxesha yenkqubo yesiqhelo ye-enamel enzima kwaye umahluko ophambili phakathi kwee-enamel zethu ezilukhuni yeyona enamel yokwenyani.
Kwi-enamel enzima, yongeza i-enamel ngaphambi kokufaka i-electroplating kwaye emva koko upolishe kwinqwelomoya efanayo nelayini yentsimbi. Umbala ngamnye kufuneka ubhakwe nganye kwi-oveni, ngokulandela umgangatho ophezulu kodwa ukwanda kwenkqubo yokuvelisa kunye neendleko. Kuthathe ixesha elide ukupholisha ukwenza ukuba ibheji ifezekise iinkcukacha ezingaphantsi kune-enamel ethambileyo, kwaye kutheni ezinye zeengcingo zinokusasazeka kwimveliso kwaye zijiyile kune Inkqubo yethu yoqweqwe lwawo lukhuni yinkqubo yanamhlanje, umahluko ophambili phakathi kwenkqubo yesiko yoqweqwe lwenkcubeko kunye ne-enamel yethu enzima yeyona enamel yokwenyani.
Egqithileyo Ukukhanya kwizikhonkwane eziMnyama eziMnyama
Okulandelayo: Iipini zelinen ezixineneyo